အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၅) - For her Myanmar
အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၅)
ပြဿနာက ထိုနေ့၏ အင်တာဗျူးသတင်းများက ဂျာနယ်နှင့် ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပျံ့သွားချိန်မှ စခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဧက အလွန်မုန်းသော ဆောင်းမနက်ခင်းတွင် သိပ်ချစ်စရာကောင်းသော ချစ်သူကိုရခဲ့သည်။ ဧက ဖွင့်မပြောမီကပင် ကြိတ်၍ ချစ်မိနေသော ဟန်နီ့အတွက်လည်း မမျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင် ဧက၏ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဧကသည် ထင်မထားလောက်အောင်ကို သိမ်မွေ့နူးညံ့သောအချစ်များဖြင့် ဟန်နီ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေခဲ့သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်မပျက်၊ မက်ဆေ့ဂ်ျပို့တာမပျက်၊ အားသည့်အချိန်တွင် အပြေးလာတွေ့တာလည်း မပျက်ကွက်ခဲ့။ သို့သော် ဧကသည် တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ် တဇွတ်ထိုးဆန်သလို ကလေးဆန်သည့် အပြုအမူများလည်းလုပ်တတ်သည်။
ဟန်နီ fashion show ပွဲ လျှောက်စရာ ရှိသည့် အခါမျိုးတွင် ဖုန်းပိတ်ထားမိသည့်အတွက် ဟိုတယ်ရှေ့မှာထွက်မလာမခြင်း ရပ် စောင့်နေတတ်ခြင်းမျိုး၊ night scene များရက်ဆက်သွား၍ မတွေ့ဖြစ်လျှင် အိမ်ရှေ့ထိ လိုက်လာတတ်ခြင်းမျိုး၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရှုတင်၌ အမျိုးသားအနုပညာရှင်များနှင့် စကားစမြည်ပြောမိသည့်အခါ သဝန်တို တတ်ခြင်းမျိုးသည် ဧက၏ အချစ်ကို ဖော်ပြခြင်းနည်းလမ်းများသာ ဖြစ်သည်လေ…
ဟန်နီက ဧကနှင့်ပတ်သက်သမျှ ယမုံကိုပြန်ပြောပြချိန်တွင် ယမုံက ဧကကို သိပ်သဘောမကျသော်လည်း မကန့်ကွက်ခဲ့။ ကန့်ကွက်ချိန်မရလောက်အောင်လည်း ဟန်နီက အဖြေပြန်ပေးပြီးသား မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် ယမုံက ဟန်နီ့ကို လူသိရှင်ကြားမတွဲရန်သာ ပြောခွင့်ရလိုက်ရှာသည်။
ယမုံပြောသည့်အတိုင်းပင် ဧကနှင့် ဟန်နီ နှစ်ဦးလုံးက လူကြား သူကြား တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ခြင်းမျိုး သိပ်မရှိ။ သိပ်ရင်းနှီးသော အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကသာ ဟန်နီတို့တွဲနေတာကို သိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဧကနှင့် ဟန်နီတို့၏ ပတ်သက်မှုသည် အေးချမ်းစွာရှိနေခဲ့သည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခု သတင်းထဲပါမလာခင်အထိပေါ့။
ထိုနေ့ကနာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်၏ ဖက်ရှင်ပွဲရှိခြင်းကြောင့် အနုပညာရှင်တော်တော်များများ တက်ရောက်ကြသည်။ ထိုထဲ၌ ဟန်နီ နှင့် ဧကလည်း အပါအဝင်ပင်။ ပွဲကြီးဖြစ်သောကြောင့် မီဒီယာများ တော်တော်များများလည်း တက်ရောက်ပြီး ဟန်နီရော ဧကပါ အင်တာဗျူးများ ဖြေရသည်။ ပြဿနာက ထိုနေ့၏ အင်တာဗျူးသတင်းများက ဂျာနယ်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပျံ့သွားချိန်မှ စခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၄)
ဧက က အချစ်ရေးတွင် “ချစ်သူနှင့်အနုပညာဘာကိုရွေးမလဲ” ဆိုသည့်မေးခွန်းကို “ကျွန်တော်တကယ်ချစ်တဲ့သူ အတွက်ဆို ဘာမဆိုစွန့်လွှတ်ရဲတယ်” ဟုဖြေထားပြီး ဟန်နီက “ဟန်နီ့အတွက် အနုပညာထက်အရေးကြီးတာ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဟန်နီ့ချစ်တဲ့သူက ဟန်နီ့အနုပညာကိုလည်း ချစ်တဲ့သူတော့ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ချစ်သူကိုရော အနုပညာကိုပါ အတူတူပါပဲ။ ဟန်နီ့အတွက်တော့ အဲဒီအရာတွေက စွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး” ဟုဖြေခဲ့သည်။
ထိုအင်တာဗျူးကိုဖတ်ပြီးနောက် ဧက က ဟန်နီ့ထံသို့ ဖုန်းဆက်လာခဲ့သည်။ ဟန်နီလည်း သွားတွေ့ရန် အဆင်ပြေသည့် အချိန်မို့ ဧကကို သွားတွေ့လိုက်သည်။ ဧကနှင့် ဟန်နီတို့ အေးအေးဆေးဆေး စကားစမြည်ပြောသည့်အခါတိုင်း ဧက နေသော ကွန်ဒိုတွင်သာ တွေ့ဖြစ်ကြသည်လေ။ ဧက၏ အိမ်ခန်းထဲ လှမ်းဝင်လိုက်တာနှင့် လာဗင်ဒါရနံ့များ ထုံသင်းနေတော့သည်။ ဧက က ထိုရနံ့ကို အလွန်နှစ်သက်သည်။ အိမ်အပြင်အဆင် အသုံးအဆောင် တော်တော်များများက ခရမ်းရောင်ပင်ဖြစ်သည်။
“အရေးတကြီး ဘာပြောစရာရှိတာလဲ ကို”
“ဟန်နီ နောက်ဆုံးဖြေခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးဖတ်ပြီးပြီလား”
“ကိုကလည်း ဟန်နီကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာပဲ ဘာဖတ်စရာလိုသေးလို့လဲ”
ဧကသည် မှန်ချပ်များဘက်သို့ မျက်နှာမူထားရာမှ ဟန်နီ့ဘက်သို့ ဖြတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြင်ရသော ဧက ၏ မျက်ဝန်းများသည် ဟန်နီ့တစ်ကိုယ်လုံးကို အေးခဲသွားစေသည်။ ဒေါသတွေကို မထွေးနိုင်မအန်နိုင်နှင့် ပွေ့ပိုက်ထားရသည့် လူတစ်ယောက်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အမုန်းမျက်လုံးမျိုး။
“ဒါဖြင့် ကို ဖြေထားတဲ့ အင်တာဗျူးကိုရော ဖတ်ပြီးပြီလား”
“ဖတ်ပြီးပါပြီ… အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကို? ကို ဘာကိုဒီလောက်ထိဒေါသထွက်နေတာလဲ ဟန်နီသဘောမပေါက်ဘူး”
“မင်းအတွက် ငါက အရေးအကြီးအဆုံး မဟုတ်ဘူးလား… ငါ့အတွက်တော့ မင်းကအရေးအကြီးဆုံးပဲ”
“ကို… ဟန်နီ့ကို မင်းတွေငါတွေ သုံးပြီး ပြောစရာမလိုဘူးနော်… ဒီကိစ္စကို အေးအေးဆေးဆေးရှင်းလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး မီဒီယာတစ်ခုက အင်တာဗျူးတစ်ခုကို ကိုဘာလို့ဒီလောက်အလေးအနက်ယူနေရတာလဲ.. ဒါက ပြဿနာဖြစ်ရမယ့် ကိစ္စကို မဟုတ်ဘူး ကို”
ဧက က ဟန်နီ့ဆီသို့ တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာကာ ဟန်နီ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
“အင်တာဗျူးကို အလေးအနက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုအလေးအနက်ထားတာ.. မင်းပြောလိုက်သမျှ စကားလုံး တိုင်းကို အလေးအနက်ထားနေတာ။ ကို ကတော့ မင်းအတွက်ဆို ဘာမဆိုအကုန်စွန့်လွှတ်ရဲတယ်… အောင်မြင်မှုလား ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလား အနုပညာလား အရာရာကိုစွန့်လွှတ်ရဲတယ် မင်းသိလား”
စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တိုင်း တစ်ခါတိုးပြီး ဆုပ်ကိုင်လိုက်သောကြောင့် ဟန်နီ့ပခုံးများ အောင့်သက်နာကျင်လာရသည်။ ဟန်နီက အနည်းငယ် လူးလွန့်ကာ ရုန်းကြည့်သော်လည်း ရုန်းလို့မရ။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း- ၃)
“ဟန်နီက ကို့ကို စွန့်လွှတ်မယ်လို့ မပြောခဲ့ဘူးလေ… ချစ်သူကိုရော အနုပညာကိုပါ မဆုံးရှုံးအောင်လို့ မယုတ်မလွန် ပြောခဲ့တာ”
“မလိုချင်ဘူး မင်းအတွက်အနုပညာကအရေးကြီးဆုံးပါဆို? ဒါဖြင့်ရင် ကိုက နံပါတ် ၁ မဟုတ်ဘူးပေါ့… တကယ်လို့များ တစ်ခုတည်းကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆို မင်းဘယ်သူ့ကို ရွေးမလဲပြော”
“ကို ဖြေရခက်မယ့် မေးခွန်းတွေမေးမနေပါနဲ့ အခုချိန်မှာ ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူး ဘာမှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘူး ဟန်နီတို့ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေရအောင်”
ဟန်နီက ဧက၏ လက်များကို ဖြုတ်ချလိုက်သည်။ ဧက က ဟန်နီ့ကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရခက်သော မျက်လုံးများနှင့် စိုက်ကြည့်နေသည်။ ဝမ်းနည်းရိပ်တွေလား အားငယ်ရိပ်တွေလား ဘာမှန်းဟန်နီသေချာမသိ။
“ဟန်နီ ပြန်တော့မယ် ကို နောက်မှအေးအေးဆေးဆေးတွေ့တာပေါ့”
ဟန်နီ ဧကကို ကျောခိုင်းကာ တံခါးဝဘက် လှည့်ထွက်လိုက်သည်။ ဧကသု က ဘာစကားမှမပြောဘဲ ဟန်နီ့ကို စိုက်ကြည့်နေတုန်းပင်းဖြစ်သည်။ ဟန်နီသည် ဧကနှင့်တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသည်။ ဟန်နီ တံခါးဝနားရောက်သွားမှ ဧက ခေါင်းထဲသို့ အတွေးတစ်ခုဝင်လာသည်။ ဟန်နီသာ ဒီတံခါးက အပြီးထွက်သွားခဲ့ရင်…..။ ဟန်နီသာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မလာဖြစ်တော့ရင်….။ ထို
အတွေးများက ဧကရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို ဆွဲခါလိုက်သလိုပင်။ ဧက ဟန်နီ့နောက်သို့အပြေး လိုက်သွားမိသည်။ ဟန်နီ့လက်ကို လှမ်းဆွဲရင်း တံခါးကိုတွန်းပိတ်လိုက်သည်။ ဟန်နီ့ကိုယ်လေးက ဧက လက်ထဲသို့ လွင့်ခနဲပါလာသည်။
“ဟန်နီ မသွားပါနဲ့ မပြန်နဲ့တော့နော်”
“ကို ဘာတွေပြောနေတာလဲ ဟန်နီအိမ်ပြန်ရမယ် ညနေဘက် အလုပ်ရှိသေးတယ်”
“မပြန်နဲ့ ပြန်သွားပြီးရင် မင်းငါ့ဆီကို ပြန်မလာတော့ဘူးမလား”
ဟန်နီ ဧကကို စိတ်ပျက်စွာကြည့်လိုက်မိသည်။ ဧကရဲ့မျက်လုံးများက တစ်စုံတရာကို အရူးအမူးတမ်းတစွဲလမ်းနေသော လူတစ်ယောက်နှင့် တူနေသည်။ ဧကဆွဲထားသော လက်များကို ဟန်နီဆောင့်ရုန်းလိုက်ရင်း…
“အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေ မပြောပါနဲ့ကို… ပြီးတော့ ဟန်နီ့ကို အဲဒီလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေ မလုပ်နဲ့ ဟန်နီမကြိုက်ဘူး ဟန်နီအခုအလုပ်ရှိတယ် ပြန်ရမယ် ညကျရင်ဖုန်းဆက်မယ်နော်”
ဟန်နီက နောက်တစ်ကြိမ် လှည့်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ သို့သော် ဧကက ဟန်နီ့ကို ပုခုံးကနေဆွဲလှည့်ကာ လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်သည်။ မျက်နှာတစ်ခြမ်းလုံး ကျိန်းစပ်နာကျင်သွားကာ တံခါးနားမှာတင် ဟန်နီ ပုံလျက်သား လဲကျသွားသည်။ ဧက၏ မထင်မှတ်ထားသော အပြုအမူကြောင့် ဟန်နီ ဘာပြောရမည်မှန်း မသိအောင်ပင် ဖြစ်သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းအစွန်း၌လည်း သွေးစအနည်းငယ် စမ်းမိသည်။ ဧကက ဟန်နီ့ကို သေချာစိုက်ကြည့်ကာ“ငါက မသွားနဲ့ဆို မသွားနဲ့ပေါ့ ဒီထက်မနာချင်ရင် ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလိုက်” ဟု တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်သည်။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း – ၂)
ဟန်နီသည် ဧက၏ အပြုအမူကို မယုံကြည်နိုင်စွာ ဘာပြောရမှန်း မသိဘဲ တံခါးဝနားမှာတင် ထိုင်ရင်း မျက်ရည်များ ကျလာသည်။ “ဘယ်လိုစိတ်နဲ့များ ဟန်နီ့ကိုရိုက်လိုက်တာလဲ။ ဟန်နီ့ကိုသူချစ်တယ်ဆိုတာရော ဘယ်လိုယုံရတော့မှာလဲ။” ဆိုသည့် အတွေးကသာ ဟန်နီ့ကို လွှမ်းမိုးနေသည်။
တံခါးနားတွင် ငိုနေသော ဟန်နီ့ကိုကြည့်ရင်းမှ ဧက အသိဝင်လာသည်။ သူဘာလုပ်လိုက်မိတာလဲ။ ဘာလို့ ဟန်နီ့ကို ရိုက်လိုက်မိတာလဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိဘဲ ရိုက်လိုက်မိတာကြောင့် ဧကပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အံ့သြနေရသည်။ တကယ်တော့ဟန်နီ့ကို နာကျင်စေချင်လို့ ရိုက်လိုက်မိတာမျိုးမဟုတ်။ ဟန်နီ့ကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ပြီး စိတ်လွတ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဧက ဟန်နီ့နားကို တရွေ့ရွေ့လျောက်သွားပြီး ဟန်နီ့နားမှာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ဧကရိုက်လိုက်သောကြောင့် ဟန်နီ့မျက်နှာ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ဖူးယောင်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းမှာလည်း သွေးစတို့နှင့်… ဧက က ဟန်နီ့မျက်နှာကို ကိုင်ဖို့ လက်လှမ်းလိုက်စဉ် ဟန်နီက နောက်ကိုတွန့်ကာ ရှောင်လိုက်သည်။
“ဟန်နီ မငိုပါနဲ့တော့နော် ကိုတောင်းပန်ပါတယ် ကို စိတ်လွတ်သွားလို့ ကိုယ့်ဘာသာဘာ လုပ်လိုက်မိမှန်းတောင် မသိဘူး ဟန်နီရယ်… နောက်ထပ်မဖြစ်စေရဘူးနော်.. ဟန်နီ့မျက်နှာမှာ ရောင်နေတာကို ဆေးခန်းသွားပြရအောင်နော်.. ကို တောင်းပန်ပါတယ် ဟန်နီရယ်”
ဧကရဲ့ပုံစံကအခုကျတော့ ပုံမှန်လိုပင်ဖြစ်နေပြီး စကားလုံးများရော မျက်လုံးများပါ ပုံမှန်အတိုင်းနွေးထွေးနေသည်။ ခုနက ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေတာက ဧကမဟုတ်ခဲ့သလိုပင်။
“လာ ထ.. ကို လိုက်ပို့မယ်”
ဟန်နီက ရှောင်လိုက်တော့ ဧကက လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်လိုက်ရင်း..
“အိုကေ ဟန်နီမကြိုက်ရင် ကိုမထိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဟန်နီအခုဆေးခန်းသွားရမယ် ကို လိုက်ပို့မယ် ကဲ ထ”
“ဟန်နီ့ဘာသာသွားမယ် ယမုံ့ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်မယ်…”
ဧကက သက်ပြင်းချလိုက်ရင်း “အိုကေပါ ဟန်နီ့သဘောပါပဲ ကို ဟန်နီ့ကို စိတ်ညစ်အောင် ထပ်မလုပ်ဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ် နောက်ထပ်လည်းနာကျင်အောင်မလုပ်ဘူး အခုယမုံလာရင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကိုတို့အောက်ဆင်း စောင့်နေရအောင်နော်”
ဟန်နီခေါင်းညိတ်ပြရင်း ထရပ်လိုက်သည်။ လစ်ဖ်ဖြင့် ကားပါကင်ကိုဆင်းလာပြီး ယမုံ့ကားရောက်လာသည်အထိ ဧက ကဟန်နီ့ကို ဂရုတစိုက်သာကြည့်နေခဲ့ပြီး လက်ဖျားနှင့်ပင် မတို့ခဲ့ပါ။ ဟန်နီကတော့ ဧကကို နားမလည်နိုင် မယုံကြည်နိုင်စိတ် တို့ရှုပ်ထွေးလျက် ယမုံ့ကားပေါ်သို့ တက်လိုက်ခဲ့တော့သည်။
ပွဿနာက ထိုနေ့၏ အငျတာဗြူးသတငျးမြားက ဂြာနယျနှငျ့ ဆိုရှယျလျမီဒီယာ ဝကျဘျဆိုကျမြားတှငျ ပြံ့သှားခြိနျမှ စခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဤသို့ဖွငျ့ ဧက အလှနျမုနျးသော ဆောငျးမနကျခငျးတှငျ သိပျခဈြစရာကောငျးသော ခဈြသူကိုရခဲ့သညျ။ ဧက ဖှငျ့မပွောမီကပငျ ကွိတျ၍ ခဈြမိနသေော ဟနျနီ့အတှကျလညျး မမြှျောလငျ့ထားသညျ့အခြိနျတှငျ ဧက၏ အခဈြကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ ဧကသညျ ထငျမထားလောကျအောငျကို သိမျမှနေူ့းညံ့သောအခဈြမြားဖွငျ့ ဟနျနီ့ကို စိတျခမျြးသာစခေဲ့သညျ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဖုနျးဆကျမပကျြ၊ မကျဆဂြေျ့ပို့တာမပကျြ၊ အားသညျ့အခြိနျတှငျ အပွေးလာတှတေ့ာလညျး မပကျြကှကျခဲ့။ သို့သျော ဧကသညျ တဈခါတဈရံ အနညျးငယျ တဇှတျထိုးဆနျသလို ကလေးဆနျသညျ့ အပွုအမူမြားလညျးလုပျတတျသညျ။
ဟနျနီ fashion show ပှဲ လြှောကျစရာ ရှိသညျ့ အခါမြိုးတှငျ ဖုနျးပိတျထားမိသညျ့အတှကျ ဟိုတယျရှမှေ့ာထှကျမလာမခွငျး ရပျ စောငျ့နတေတျခွငျးမြိုး၊ night scene မြားရကျဆကျသှား၍ မတှဖွေ့ဈလြှငျ အိမျရှထေိ့ လိုကျလာတတျခွငျးမြိုး၊ တဈခါတဈရံ ရှုတငျ၌ အမြိုးသားအနုပညာရှငျမြားနှငျ့ စကားစမွညျပွောမိသညျ့အခါ သဝနျတို တတျခွငျးမြိုးသညျ ဧက၏ အခဈြကို ဖျောပွခွငျးနညျးလမျးမြားသာ ဖွဈသညျလေ…
ဟနျနီက ဧကနှငျ့ပတျသကျသမြှ ယမုံကိုပွနျပွောပွခြိနျတှငျ ယမုံက ဧကကို သိပျသဘောမကသြျောလညျး မကနျ့ကှကျခဲ့။ ကနျ့ကှကျခြိနျမရလောကျအောငျလညျး ဟနျနီက အဖွပွေနျပေးပွီးသား မဟုတျပါလား။ ထို့ကွောငျ့ ယမုံက ဟနျနီ့ကို လူသိရှငျကွားမတှဲရနျသာ ပွောခှငျ့ရလိုကျရှာသညျ။
ယမုံပွောသညျ့အတိုငျးပငျ ဧကနှငျ့ ဟနျနီ နှဈဦးလုံးက လူကွား သူကွား တှဲသှားတှဲလာ လုပျခွငျးမြိုး သိပျမရှိ။ သိပျရငျးနှီးသော အနုပညာရှငျ အသိုငျးအဝိုငျးကသာ ဟနျနီတို့တှဲနတောကို သိကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဧကနှငျ့ ဟနျနီတို့၏ ပတျသကျမှုသညျ အေးခမျြးစှာရှိနခေဲ့သညျဟုပွောနိုငျပါသညျ။ အငျတာဗြူးတဈခု သတငျးထဲပါမလာခငျအထိပေါ့။
ထိုနကေ့နာမညျကွီး ဒီဇိုငျနာတဈယောကျ၏ ဖကျရှငျပှဲရှိခွငျးကွောငျ့ အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြား တကျရောကျကွသညျ။ ထိုထဲ၌ ဟနျနီ နှငျ့ ဧကလညျး အပါအဝငျပငျ။ ပှဲကွီးဖွဈသောကွောငျ့ မီဒီယာမြား တျောတျောမြားမြားလညျး တကျရောကျပွီး ဟနျနီရော ဧကပါ အငျတာဗြူးမြား ဖွရေသညျ။ ပွဿနာက ထိုနေ့၏ အငျတာဗြူးသတငျးမြားက ဂြာနယျနှငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာဝကျဘျဆိုကျမြားတှငျ ပြံ့သှားခြိနျမှ စခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၄)
ဧက က အခဈြရေးတှငျ “ခဈြသူနှငျ့အနုပညာဘာကိုရှေးမလဲ” ဆိုသညျ့မေးခှနျးကို “ကြှနျတျောတကယျခဈြတဲ့သူ အတှကျဆို ဘာမဆိုစှနျ့လှတျရဲတယျ” ဟုဖွထေားပွီး ဟနျနီက “ဟနျနီ့အတှကျ အနုပညာထကျအရေးကွီးတာ မရှိဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ဟနျနီ့ခဈြတဲ့သူက ဟနျနီ့အနုပညာကိုလညျး ခဈြတဲ့သူတော့ ဖွဈစခေငျြတယျ။ ခဈြသူကိုရော အနုပညာကိုပါ အတူတူပါပဲ။ ဟနျနီ့အတှကျတော့ အဲဒီအရာတှကေ စှနျ့လှတျနိုငျတဲ့ အရာတှေ မဟုတျပါဘူး” ဟုဖွခေဲ့သညျ။
ထိုအငျတာဗြူးကိုဖတျပွီးနောကျ ဧက က ဟနျနီ့ထံသို့ ဖုနျးဆကျလာခဲ့သညျ။ ဟနျနီလညျး သှားတှရေ့နျ အဆငျပွသေညျ့ အခြိနျမို့ ဧကကို သှားတှလေို့ကျသညျ။ ဧကနှငျ့ ဟနျနီတို့ အေးအေးဆေးဆေး စကားစမွညျပွောသညျ့အခါတိုငျး ဧက နသေော ကှနျဒိုတှငျသာ တှဖွေ့ဈကွသညျလေ။ ဧက၏ အိမျခနျးထဲ လှမျးဝငျလိုကျတာနှငျ့ လာဗငျဒါရနံ့မြား ထုံသငျးနတေော့သညျ။ ဧက က ထိုရနံ့ကို အလှနျနှဈသကျသညျ။ အိမျအပွငျအဆငျ အသုံးအဆောငျ တျောတျောမြားမြားက ခရမျးရောငျပငျဖွဈသညျ။
“အရေးတကွီး ဘာပွောစရာရှိတာလဲ ကို”
“ဟနျနီ နောကျဆုံးဖွခေဲ့တဲ့ အငျတာဗြူးဖတျပွီးပွီလား”
“ကိုကလညျး ဟနျနီကိုယျတိုငျဖွခေဲ့တာပဲ ဘာဖတျစရာလိုသေးလို့လဲ”
ဧကသညျ မှနျခပျြမြားဘကျသို့ မကျြနှာမူထားရာမှ ဟနျနီ့ဘကျသို့ ဖွတျခနဲ လှညျ့ကွညျ့သညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ မွငျရသော ဧက ၏ မကျြဝနျးမြားသညျ ဟနျနီ့တဈကိုယျလုံးကို အေးခဲသှားစသေညျ။ ဒေါသတှကေို မထှေးနိုငျမအနျနိုငျနှငျ့ ပှပေို့ကျထားရသညျ့ လူတဈယောကျ၏ ကွောကျမကျဖှယျရာ အမုနျးမကျြလုံးမြိုး။
“ဒါဖွငျ့ ကို ဖွထေားတဲ့ အငျတာဗြူးကိုရော ဖတျပွီးပွီလား”
“ဖတျပွီးပါပွီ… အဲ့ဒါဘာဖွဈလို့လဲကို? ကို ဘာကိုဒီလောကျထိဒေါသထှကျနတောလဲ ဟနျနီသဘောမပေါကျဘူး”
“မငျးအတှကျ ငါက အရေးအကွီးအဆုံး မဟုတျဘူးလား… ငါ့အတှကျတော့ မငျးကအရေးအကွီးဆုံးပဲ”
“ကို… ဟနျနီ့ကို မငျးတှငေါတှေ သုံးပွီး ပွောစရာမလိုဘူးနျော… ဒီကိစ်စကို အေးအေးဆေးဆေးရှငျးလို့ရတယျ။ နောကျပွီး မီဒီယာတဈခုက အငျတာဗြူးတဈခုကို ကိုဘာလို့ဒီလောကျအလေးအနကျယူနရေတာလဲ.. ဒါက ပွဿနာဖွဈရမယျ့ ကိစ်စကို မဟုတျဘူး ကို”
ဧက က ဟနျနီ့ဆီသို့ တဈလှမျးခငျြးလြှောကျလာကာ ဟနျနီ့ပုခုံးနှဈဖကျကို ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ။
“အငျတာဗြူးကို အလေးအနကျထားတာ မဟုတျဘူး။ မငျးကိုအလေးအနကျထားတာ.. မငျးပွောလိုကျသမြှ စကားလုံး တိုငျးကို အလေးအနကျထားနတော။ ကို ကတော့ မငျးအတှကျဆို ဘာမဆိုအကုနျစှနျ့လှတျရဲတယျ… အောငျမွငျမှုလား ခမျြးသာကွှယျဝမှုလား အနုပညာလား အရာရာကိုစှနျ့လှတျရဲတယျ မငျးသိလား”
စကားတဈခှနျးပွောလိုကျတိုငျး တဈခါတိုးပွီး ဆုပျကိုငျလိုကျသောကွောငျ့ ဟနျနီ့ပခုံးမြား အောငျ့သကျနာကငျြလာရသညျ။ ဟနျနီက အနညျးငယျ လူးလှနျ့ကာ ရုနျးကွညျ့သျောလညျး ရုနျးလို့မရ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး- ၃)
“ဟနျနီက ကို့ကို စှနျ့လှတျမယျလို့ မပွောခဲ့ဘူးလေ… ခဈြသူကိုရော အနုပညာကိုပါ မဆုံးရှုံးအောငျလို့ မယုတျမလှနျ ပွောခဲ့တာ”
“မလိုခငျြဘူး မငျးအတှကျအနုပညာကအရေးကွီးဆုံးပါဆို? ဒါဖွငျ့ရငျ ကိုက နံပါတျ ၁ မဟုတျဘူးပေါ့… တကယျလို့မြား တဈခုတညျးကို ရှေးခယျြရမယျဆို မငျးဘယျသူ့ကို ရှေးမလဲပွော”
“ကို ဖွရေခကျမယျ့ မေးခှနျးတှမေေးမနပေါနဲ့ အခုခြိနျမှာ ဘာပွဿနာမှလညျးမရှိဘူး ဘာမှလညျးရှေးခယျြစရာမရှိဘူး ဟနျနီတို့ အေးအေးခမျြးခမျြးပဲနရေအောငျ”
ဟနျနီက ဧက၏ လကျမြားကို ဖွုတျခလြိုကျသညျ။ ဧက က ဟနျနီ့ကို အဓိပ်ပာယျဖျောရခကျသော မကျြလုံးမြားနှငျ့ စိုကျကွညျ့နသေညျ။ ဝမျးနညျးရိပျတှလေား အားငယျရိပျတှလေား ဘာမှနျးဟနျနီသခြောမသိ။
“ဟနျနီ ပွနျတော့မယျ ကို နောကျမှအေးအေးဆေးဆေးတှတေ့ာပေါ့”
ဟနျနီ ဧကကို ကြောခိုငျးကာ တံခါးဝဘကျ လှညျ့ထှကျလိုကျသညျ။ ဧကသု က ဘာစကားမှမပွောဘဲ ဟနျနီ့ကို စိုကျကွညျ့နတေုနျးပငျးဖွဈသညျ။ ဟနျနီသညျ ဧကနှငျ့တဖွညျးဖွညျးဝေးသှားသညျ။ ဟနျနီ တံခါးဝနားရောကျသှားမှ ဧက ခေါငျးထဲသို့ အတှေးတဈခုဝငျလာသညျ။ ဟနျနီသာ ဒီတံခါးက အပွီးထှကျသှားခဲ့ရငျ…..။ ဟနျနီသာ နောကျတဈကွိမျ ပွနျမလာဖွဈတော့ရငျ….။ ထို
အတှေးမြားက ဧကရဲ့ နှလုံးသားတဈခုလုံးကို ဆှဲခါလိုကျသလိုပငျ။ ဧက ဟနျနီ့နောကျသို့အပွေး လိုကျသှားမိသညျ။ ဟနျနီ့လကျကို လှမျးဆှဲရငျး တံခါးကိုတှနျးပိတျလိုကျသညျ။ ဟနျနီ့ကိုယျလေးက ဧက လကျထဲသို့ လှငျ့ခနဲပါလာသညျ။
“ဟနျနီ မသှားပါနဲ့ မပွနျနဲ့တော့နျော”
“ကို ဘာတှပွေောနတောလဲ ဟနျနီအိမျပွနျရမယျ ညနဘေကျ အလုပျရှိသေးတယျ”
“မပွနျနဲ့ ပွနျသှားပွီးရငျ မငျးငါ့ဆီကို ပွနျမလာတော့ဘူးမလား”
ဟနျနီ ဧကကို စိတျပကျြစှာကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ဧကရဲ့မကျြလုံးမြားက တဈစုံတရာကို အရူးအမူးတမျးတစှဲလမျးနသေော လူတဈယောကျနှငျ့ တူနသေညျ။ ဧကဆှဲထားသော လကျမြားကို ဟနျနီဆောငျ့ရုနျးလိုကျရငျး…
“အဓိပ်ပာယျမရှိတာတှေ မပွောပါနဲ့ကို… ပွီးတော့ ဟနျနီ့ကို အဲဒီလို ကွမျးကွမျးတမျးတမျးတှေ မလုပျနဲ့ ဟနျနီမကွိုကျဘူး ဟနျနီအခုအလုပျရှိတယျ ပွနျရမယျ ညကရြငျဖုနျးဆကျမယျနျော”
ဟနျနီက နောကျတဈကွိမျ လှညျ့ထှကျဖို့ ကွိုးစားသညျ။ သို့သျော ဧကက ဟနျနီ့ကို ပုခုံးကနဆှေဲလှညျ့ကာ လကျပွနျရိုကျခလြိုကျသညျ။ မကျြနှာတဈခွမျးလုံး ကြိနျးစပျနာကငျြသှားကာ တံခါးနားမှာတငျ ဟနျနီ ပုံလကျြသား လဲကသြှားသညျ။ ဧက၏ မထငျမှတျထားသော အပွုအမူကွောငျ့ ဟနျနီ ဘာပွောရမညျမှနျး မသိအောငျပငျ ဖွဈသှားသညျ။ နှုတျခမျးအစှနျး၌လညျး သှေးစအနညျးငယျ စမျးမိသညျ။ ဧကက ဟနျနီ့ကို သခြောစိုကျကွညျ့ကာ“ငါက မသှားနဲ့ဆို မသှားနဲ့ပေါ့ ဒီထကျမနာခငျြရငျ ငွိမျငွိမျထိုငျနလေိုကျ” ဟု တဈလုံးခငျြးပွောလိုကျသညျ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး – ၂)
ဟနျနီသညျ ဧက၏ အပွုအမူကို မယုံကွညျနိုငျစှာ ဘာပွောရမှနျး မသိဘဲ တံခါးဝနားမှာတငျ ထိုငျရငျး မကျြရညျမြား ကလြာသညျ။ “ဘယျလိုစိတျနဲ့မြား ဟနျနီ့ကိုရိုကျလိုကျတာလဲ။ ဟနျနီ့ကိုသူခဈြတယျဆိုတာရော ဘယျလိုယုံရတော့မှာလဲ။” ဆိုသညျ့ အတှေးကသာ ဟနျနီ့ကို လှမျးမိုးနသေညျ။
တံခါးနားတှငျ ငိုနသေော ဟနျနီ့ကိုကွညျ့ရငျးမှ ဧက အသိဝငျလာသညျ။ သူဘာလုပျလိုကျမိတာလဲ။ ဘာလို့ ဟနျနီ့ကို ရိုကျလိုကျမိတာလဲ။ ကိုယျကိုယျတိုငျတောငျ သတိမထားမိဘဲ ရိုကျလိုကျမိတာကွောငျ့ ဧကပငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အံ့သွနရေသညျ။ တကယျတော့ဟနျနီ့ကို နာကငျြစခေငျြလို့ ရိုကျလိုကျမိတာမြိုးမဟုတျ။ ဟနျနီ့ကို ဆုံးရှုံးရမှာကွောကျပွီး စိတျလှတျသှားခွငျးသာ ဖွဈသညျ။
ဧက ဟနျနီ့နားကို တရှရှေ့လြေ့ောကျသှားပွီး ဟနျနီ့နားမှာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ဧကရိုကျလိုကျသောကွောငျ့ ဟနျနီ့မကျြနှာ ညာဘကျခွမျးမှာ ဖူးယောငျနသေညျ။ နှုတျခမျးမှာလညျး သှေးစတို့နှငျ့… ဧက က ဟနျနီ့မကျြနှာကို ကိုငျဖို့ လကျလှမျးလိုကျစဉျ ဟနျနီက နောကျကိုတှနျ့ကာ ရှောငျလိုကျသညျ။
“ဟနျနီ မငိုပါနဲ့တော့နျော ကိုတောငျးပနျပါတယျ ကို စိတျလှတျသှားလို့ ကိုယျ့ဘာသာဘာ လုပျလိုကျမိမှနျးတောငျ မသိဘူး ဟနျနီရယျ… နောကျထပျမဖွဈစရေဘူးနျော.. ဟနျနီ့မကျြနှာမှာ ရောငျနတောကို ဆေးခနျးသှားပွရအောငျနျော.. ကို တောငျးပနျပါတယျ ဟနျနီရယျ”
ဧကရဲ့ပုံစံကအခုကတြော့ ပုံမှနျလိုပငျဖွဈနပွေီး စကားလုံးမြားရော မကျြလုံးမြားပါ ပုံမှနျအတိုငျးနှေးထှေးနသေညျ။ ခုနက ဒေါသတကွီး ဖွဈနတောက ဧကမဟုတျခဲ့သလိုပငျ။
“လာ ထ.. ကို လိုကျပို့မယျ”
ဟနျနီက ရှောငျလိုကျတော့ ဧကက လကျနှဈဖကျကို မွှောကျလိုကျရငျး..
“အိုကေ ဟနျနီမကွိုကျရငျ ကိုမထိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ဟနျနီအခုဆေးခနျးသှားရမယျ ကို လိုကျပို့မယျ ကဲ ထ”
“ဟနျနီ့ဘာသာသှားမယျ ယမုံ့ကို ဖုနျးဆကျချေါမယျ…”
ဧကက သကျပွငျးခလြိုကျရငျး “အိုကပေါ ဟနျနီ့သဘောပါပဲ ကို ဟနျနီ့ကို စိတျညဈအောငျ ထပျမလုပျဘူးလို့ ကတိပေးပါတယျ နောကျထပျလညျးနာကငျြအောငျမလုပျဘူး အခုယမုံလာရငျအဆငျသငျ့ဖွဈအောငျ ကိုတို့အောကျဆငျး စောငျ့နရေအောငျနျော”
ဟနျနီခေါငျးညိတျပွရငျး ထရပျလိုကျသညျ။ လဈဖျဖွငျ့ ကားပါကငျကိုဆငျးလာပွီး ယမုံ့ကားရောကျလာသညျအထိ ဧက ကဟနျနီ့ကို ဂရုတစိုကျသာကွညျ့နခေဲ့ပွီး လကျဖြားနှငျ့ပငျ မတို့ခဲ့ပါ။ ဟနျနီကတော့ ဧကကို နားမလညျနိုငျ မယုံကွညျနိုငျစိတျ တို့ရှုပျထှေးလကျြ ယမုံ့ကားပျေါသို့ တကျလိုကျခဲ့တော့သညျ။
Tags: Dark, Fiction Series, love, Over, overpossessive love, Possess, Psycho
Black Hole ရဲ့ ပထမဆုံးဓာတ်ပုံကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး (သို့) Katie Bouman
ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့တဲ့ Notre Dame ဘုရားကျောင်း မီးလောင်မှူ
For Her Myanmar April 12, 2019
ချစ်သူဆီက ယောက်ျားလေးတွေအလိုချင်ဆုံးအရာ (၅) ခု
Sugar Cane May 24, 2019
ကြည့်ရင်း ကြည်နူးပြီး ပြုံးနေရမယ့် ချစ်စရာ BL ဇာတ်ကားကောင်း (၃)ကား
Wathun May 20, 2019